RUDO: Martin Vrijland
Nyoka, Kundalini, Evha, rudo uye chiedza
Akaiswa mukati THE LOVE	by Martin Vrijland	musi wa 6 January 2016	• 11 Comments
Nokuda kwekunzwisisa kwakanaka kwechinyorwa ichi kunobatsira kuti une ruzivo rwechitendero. Somuenzaniso, zvinobatsira kuziva nyaya yekusika kubva muBhaibheri. Nhau yaAdam naEvha inouya pano nechiedza chakasiyana zvakasiyana uye inoratidzika kunge inopfuura kungoita nheyo yechitendero kubva [...]
Pane zvinyorwa zvitsvene muBhaibheri. Iko kuunganidza kwemabhuku ayo vanhu vakawanda uye ikozvino vava kutanga kuziva kuti tinokwanisa kuenzanisa izvi nemashoko ezuva ranhasi; mupfungwa yokuti nhau dzedu dzose dzakagadzirirwa nevakuru makuru ehurumende. Nokudaro mabhuku ese eBhaibheri akashandurwa nechigadziko chemasimba zvakare. Zvechokwadi [...]
Mufaro, kutya uye rudo rwekubatana
Akaiswa mukati THE LOVE	by Martin Vrijland	musi wa 4 April 2015	• 3 Comments
Munhu nguva dzose anoita kunge ari kutsvaga mufaro, asi nguva dzose anoita seasingagoneki mumufaro iwoyo. Kana tikadanana nerinzeve dzedu, tinonzwa tichifara, asi kutya kutya kurasikirwa iko kuri kuwedzerawo. Kana tikangowana mari yakawanda uye tinogona kutenga motokari yakanaka, ipapo [...]
Total Visits: 1.240.937